एशियाली सभ्यता सम्मेलनको अन्तर वयान : नयाँ सभ्यता मार्ग - Jhilko
एशियाली सभ्यता सम्मेलनको अन्तर वयान : नयाँ सभ्यता मार्ग
गएको मे १५ देखि २२ तारिखसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनले एशियाली सभ्यता सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यो । एशियाका ४७ मुलुकका करिव दुई हजार बढीले औपचारिक सहभागिता जनाएको आयोजक देशले दावी गरेको छ । यो सम्मेलनको अन्तर वयान आइसकेको छैन । सम्मेलनलाई कुम्भ मेला सरह उपयोग गर्ने अर्थ र उद्देश्यले सम्मेलनको नाभी वयानमा पुग्न नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । अर्को सम्मेलनको उद्देश्य र लक्षलाई एकाङ्की चस्माले हेर्दा यसको सार पक्ष नेपथ्यमा धकेलिएर रुप पक्ष अगाडि आएको छ ।
चीनले सम्मेलन आयोजना गरेकाले सम्मेलनको अर्थ चीनको महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने वा चीनको द्रुत आर्थिक विकासको प्रभाव विस्तार गर्न गरिएको रंगमञ्च हो भन्ने ठहरमा पुग्न सकिन्छ । तर विषय त्यतिमै सीमित छैन । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई रोक्ने वा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई विस्तार गर्ने विषयसँग मात्र सङ्केन्द्रित छैन । यो आजको एशियाली मुलुकको परम्परागत सभ्यतासँग आधुनिक सभ्यतासँग पुनर्मिलन गराउने विचारसँग अन्तरसम्वन्धित छ । नयाँ एशियाली सभ्यताको घुम्ती विन्दु हुनेछ ।
कुनै समय थियो, एशियाली सभ्यता विश्व मानव सभ्यताको अब्बल विश्वविद्यालय थियो । तर एशियन सभ्यताले स्थापित गरेको सभ्यताबीचको द्वन्द्वले एशियालाई पछाडि धकेल्यो । हुनत सभ्यता भनेको सामाजिक व्यवस्थाको उच्चतम दर्शन हो । समाजमा रहनको लागि गरिने तौरतरिका, पद्धतिको संयुक्त रुप हो । र, कुनै पनि सभ्यता आफैमा खराव होइन । मानव समाज विकासमा सभ्यताकै हात छ । यसर्थ हरेक सभ्यताले समाज विकासको मार्ग निर्देशन गरेको हो । तर सभ्यताबीचको जुँगे लडाईंले एशियाली सभ्यता एकअर्कामा वर्ग दुश्मन जस्तो भए । सभ्यताको झण्डामा भएको लडाईंले एशियाली समाजलाइ लामो समयसम्म पछाडि धकेल्यो ।
यहाँ फेरि पनि एशियाली सभ्यता सम्मेलनकै चर्चा गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । सम्मेलनको विविध विशेषताहरु थिए । सभ्यता भन्नाले त्यहाँ भौतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्ध हुन्छ । अतः सभ्यतालाई उजिल्याउन सम्मेलनले एशियाली पुर्खाहरुले ‘संयुक्त उज्यालो सभ्यता’ को अन्तरंग जान्ने मौका पाए । त्यहाँ चार ठूला बुँदामा सभ्यताको उपलब्धि सिर्जना गरियो र सम्मेलन सम्बन्धी २६ वटा विषय समेटिए ।
चिनियाँ मिडियाको अभियान
यसै अवसरमा चिनियाँ मिडिया ग्रुपले २२ वटा मुलुक घुमेर एशियाली सभ्यताको वित्त चित्र निर्माण गरेका छन् । सम्मेलनका सहभागीले वित्त चित्रको रसास्वावदन गर्न पाए । यो वित्त चित्र एशियाली मुलुकमा आमसमुदायको लागि प्रदर्शन गरिए एशियाको एकतामा अर्को इँट थप्नेछ । र, युद्धलाई एशियालीहरुले नकार्दै जाने छन् । एशियाली सभ्यताको प्रकाश पार्ने यस्ता वित्त चित्रले एशियामा आम र एकीकृत धारणा बनाउन झनै सहज हुनेछ ।
यो सम्मेलनलाई पहिलो पटक चीनको छिमेकी मुलुक पाकिस्तान र भारतले उच्च महत्व दिएका छन् । ‘बेल्ट एण्ड रोड प्रस्ताव र एशियाली भाग्य समुदायको निर्माण विषय’ गोष्ठीमा पाकिस्तानी राजदूत मसुद खालिदले भनेका थिए, ‘सांस्कृतिक दृष्टिकोणले हेर्दा इतिहासमा पाकिस्तानको क्वादर संस्कृतिले चीनको वौद्धिक धार्मिक संस्कृतिको प्रचार–प्रसार तथा विकासका लागि गहन सिर्जना गरेको छ ।’ पाकिस्तान र चीनलाई जोड्ने सांस्कृतिक पुलले पनि दुवै देशको सम्बन्ध विस्तारमा अरु बढावा दिने राजदूत खालिदले घोषणा गरेका थिए । यसले चीन–पाक सम्बन्धको सेतु अहिले २८ हजार पाकिस्तानी विद्यार्थीहरु चीनमा विविध विषयमा अध्यययनरत छन् । यता १७ हजार चिनियाँहरु पाकिस्तानमा भएको विभिन्न योजना र अध्ययनमा सहभागी छन् ।
यसरी नै चीनका लागि भारतीय राजदूत विक्रम मिश्रीले भारत–चीन सभ्यता अन्योन्याश्रित रहेको बताएका थिए । एशियाली सभ्यताको जननी यी दुई देश भएकोले आधुनिक सभ्यताको जग हाल्न पनि दूवै देशको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको कथन थियो । ‘एशिया सभ्यता आदान–प्रदान सन्दर्भ र साझा भाग्य समुदाय’ गोष्ठीमा राजदूत मिश्रीले भारत चीन सभ्यता सम्बन्धी वार्ता तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान सबल पार्न आश्वस्त बनाए । चीन भारत दौत्य सम्बन्ध भएको ७० औं वर्षगाँठमा आपसी सम्बन्धलाई नयाँ स्तरमा उकास्ने अपेक्ष राजदूत मिश्रीको थियो ।
सम्मेलनको अर्को आकर्षण ‘हाम्रो एशिया’ गीत हो । ‘पहाड पानीको नाता, जनता मनबीचको घनिष्ठता’ र एउट भाग्य बोलको गीतले एशियालीहरुको रांंै ठाडो पारी दिन सक्छ ।
एकातिर साम्राज्यवादी मुलुकले हिन्द–प्रशान्त रणनीति जस्तो खुँखार युद्ध नीति अगाडि सारिरहेको बेला एशियाली सभ्यता सम्मेलन एउटा कोशे ढुंगो हो । प्राचीन रेसम मार्ग व्युँताएर नयाँ मार्ग बेल्ट एण्ड रोड ब्युँताए जस्तै यो प्राचिनतम सभ्यतासँग नयाँ सभ्यता जोड्ने कडी हो ।
यो सभ्यता सम्मेलन बीआरआर्ईसँग अभिन्न रुपमा जोडिएको छ । बीआरआई पछि सभ्यता मार्ग बनाउने चिनिया राष्ट्रपति सि जिनपिङको प्रस्ताव आइसकेको छ । यो सभ्यता सम्मेलन, वार्ता, गोष्ठी र छलफलहरु बीआरआईलाई प्रवद्र्धन गर्दै सभ्यताको मार्ग प्रशस्त गर्ने महान अभियान हो । यसले एशियाली मुलुकलाई अबको शताब्दीमा एकतामा जोड्नेछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
२०७६ साल जेठ २३
नेप्से ४.६९ अंकले घट्यो , केही कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण कायमै
चन्दका कार्यकर्ता कारागार चलान
हजुर के खाने ? गाँजा भाँग,कीरा फट्याङ्ग्रा की झोला ?
ट्वेन्टी ट्वेन्टीका आगामी दिनमा रेस्टरन्टमा मानिसहरूको खाना खाने संस्कृतिमा परिवर्तन...
सहकारीको कूल पूँजीको ७० प्रतिशत अपचलन
नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको कूल पूँजीको झन्डै ७० प्रतिशत रकम...
महाकालीको बगरमा पुरिँदै सीमास्तम्भ
स्थानीयवासी सीमास्तम्भको जीर्णोद्धार नहुँदा सीमा छुट्याउनै सकस पर्ने बेला आरइरहेकोप्रति...
जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गर्ने कांग्रेस सांसद साह साधारण...
न्यायधिश तेजप्रसाद पौडेलको इजलासले सांसद साह विरुद्धको मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा...